Senator Bukhaari “Farmaajo Dalka Ayuu Dib Ugu Celinayaa Xilligii Ku-meel-Gaarka” – Great Banaadir
Gudoomiye Kuxigeenka 1aad ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, Senator Abshir Maxamed Axmed (Abshir Bukhaari) ayaa si kulul u weeraray Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Gudoomiye Kuxigeenka Aqalka Sare ayaa sheegay Afartii Sano ee Madaxweyne Farmaajo uu Xilka haayay in uu waxyeeleeyay Mabaadi’da Asaasiga u ah Qranka.
“Muddo Afar Sano ah oo uu Madaxweyne ahaa, Maxamed Farmaajo waxaa uu nijaaseeyay Mabaadi’da Aasaasiga ee Qarankeenna, wuxuu si ba’an u wiiqay Baarlamaanka Federaalka, wuxuu u gudbay Dagaalka Dowlad Goboleedyada xubnaha ka ah Dowladda Federaalka, isagoo si xun u dhaawacay Ruuxda, Madax-bannaanida iyo Hanka Qarankeenna, wuxuuna baabi’iyay Himilooyinkii Soomaalida ee Mustaqbal wanaagsan.” Ayuu yiri Senator Abshir Maxamed Axmed.
Sidoo kale waxaa uu Madaxweynuhu ku eedeeyay in uu kala qaybiyay Beelaha Soomaaliyeed, isla-markaana uu Dalku dib ugu celinayo Xilligii Ku-meel-gaarka.
“Farmaajo wuxuu kala qaybiyay Qabaa’ilkii la heshiisiiyay, Laamaha Amniga wuxuu hoos geeyay Askarta, si ay u aamusiyaan kuwa isaga ka soo horjeeda, oo ay u taageeraan Kali Talisnimadiisa. Wuxuu Soomaaliya ka dhacay Hankii Dowladnimo iyo inuu Dalka dib ugu soo celiyo Xilligii ku-meel-gaarka ee Cabdiqaasim, isagoona doortay inuu noqdo Kaligii taliye.” Ayuu yiri Abshir Bukhaari.
Abshir Bukhaari ayaa yiri “Wuxuu cambaareeyay Taageerayaasha Dalka ugu dhow, laakiin ugu dambeyntii waxa uu ku baaqayaa wax ka qabashada Shisheeyaha. Soomaaliya khasaaro ayay ku jirtaa, balse waa inay mar kale kacdaa.”
Senator Bukhaari ayaa Warkan ku sheegay Qoraal uu soo dhigay Bartiisa Xiriirka Dadweynaha.
Sucdi: ”Ma Qabo, In Tallaalka Qofka Lagu Qasbo”
Countries from which entry to the UK is banned – ‘Red List’ Countries